The dijitalụ afọ juru ebe nile, ọ na-eto eto, na ọ na-agbanwe ihe bụ mee ka ndị nnyocha.
The Central premise nke akwụkwọ a bụ na dijitalụ afọ emepụta ohere ọhụrụ na-elekọta mmadụ nnyocha. Researchers nwere ike ugbu a na-edebe ihe omume, ịjụ ajụjụ, na-agba ọsọ nwere, na imekota ihe n'ụzọ na-bụ nanị agaghị ekwe omume na ezi adịbeghị anya gara aga. Tinyere ihe ndị a ohere ọhụrụ na-abịa ọhụrụ ize ndụ; na-eme nnyocha nwere ike ugbu a emerụ ndị mmadụ ihe n'ụzọ na-bụ-agaghị ekwe omume na ezi adịbeghị anya gara aga. The isi iyi nke ndị a ohere na ihe ize ndụ bụ oge mgbanwe site na analọg afọ na dijitalụ afọ. Mgbanwe a emeghị otu mgbe-dị ka a ìhè-mgba ọkụ atụgharị on-na, n'ezie, ntughari akabeghi zu oke. Ma, site a anyị na hụrụ iji mara na ihe big na-eme.
Otu ụzọ isi na-achọpụta mgbanwe a bụ anya n'ihi na mgbanwe nke ụbọchị ndụ gị. Ọtụtụ ihe ná ndụ gị na-eji na-analọg na-now digital. Ma eleghị anya, ị na-eji a igwefoto na film na ugbu a ị na-eji a igwefoto dijitalụ (nke bụ ma eleghị anya akụkụ nke gị dijitalụ ekwentị). Ma eleghị anya, ị na-agụrụ a anụ ahụ akwụkwọ akụkọ na ugbu a ị na-agụ otu online akwụkwọ akụkọ. Ma eleghị anya, ị na-eji iji kwụọ ụgwọ maka ihe na nkịtị ego na now ị na-akwụ na a kaadị. Na nke ọ bụla, mgbanwe site analọg na-dijitalụ pụtara na ihe ọmụma a na-weghaara na echekwara digitally.
N'eziokwu, mgbe anya na na nchịkọta, mmetụta nke mgbanwe ndị dị ịtụnanya. The ego nke ọmụma na ụwa na-amụba n'ụzọ dị ngwa na ndị ọzọ nke na ozi a-echekwa digitally, nke mmemmem analysis, nnyefe, na-asọkọta ọnụ (ọgụgụ 1.1) (Hilbert and López 2011) . All nke a digital ọmụma abịa na-akpọ "nnukwu data." Tụkwasị na nke a mgbawa nke dijitalụ data, e nwere ihe yiri ibu anyị ohere Mgbakọ ike (ọgụgụ 1.1) (Hilbert and López 2011) . Ndị a na ọnọdụ-amụba digital ọmụma ma na-amụba Mgbakọ-show dịghị ihe ịrịba ama nke selata.
Ọgụgụ 1.1: Information nchekwa ikike na Mgbakọ ike na-amụba n'ike n'ike. Ọzọkwa, ozi nchekwa bụ ugbu a fọrọ nke nta nanị digital (Hilbert and López 2011) . Mgbanwe ndị a ike ịrịba ohere na-elekọta mmadụ na-eme nnyocha.
Maka nzube nke na-elekọta mmadụ nnyocha, m na-eche ihe ndị kasị mkpa atụmatụ nke dijitalụ afọ bụ kọmputa n'ebe nile. Malite dị ka ụlọ-sized ígwè ọrụ ndị na-nanị dị ka ọchịchị na nnukwu ụlọ ọrụ, kọmputa e mgbe niile shrinking na size ma na-amụba na ewu ewu. Onye ọ bụla afọ iri ebe ọ bụ na 1980s, anyị na hụrụ a ọhụrụ ụdị Mgbakọ iputa: kọmputa, Laptọọpụ, smart phones, na now agbakwunyere processors (ie, kọmputa n'ime ngwaọrụ dị ka ụgbọala, ese, na thermostats) (Waldrop 2016) . Esiwanye ndị a ubiquotous kọmputa eme ihe karịrị nanị gbakọọ; ha onwe-ha chọpụta, ụlọ ahịa, na-ebunye ọmụma.
N'ihi na-eme nnyocha, ibuana ke kọmputa n'ebe nile bụ ndị kacha ịhụ online, gburugburu ebe na-n'ụzọ zuru ezu tụrụ atụ na amenable ka experimentation. Dị ka ihe atụ, ihe online ụlọ ahịa nwere ike mfe anakọta incredibly kpọmkwem data banyere ịzụ ahịa na ịzụta ihe nakawa etu esi nke ọtụtụ nde ndị ahịa. Ọzọkwa, ihe online ụlọ ahịa nwere ike mfe randomize ụfọdụ ndị ahịa na-enweta otu ịzụ ahịa ahụmahụ na ndị ọzọ na-enweta ọzọ. Ikike a randomize on top of nsuso pụtara na online echekwa nwere ike mgbe niile na-agba ọsọ enweghị usoro na-achịkwa nwere. N'eziokwu, ọ bụrụ na gị na mgbe zụta ihe ọ bụla site na online ụlọ ahịa àgwà gị e-esoro na ị na na na fọrọ nke nta N'ezie kemgbe a soò na nnwale, ma ị maara ma ọ bụ.
Nke a n'ụzọ zuru ezu-tụrụ-n'ụzọ zuru ezu-randomizable ụwa na-abụghị nanị na-eme online; ọ na-esiwanye na-eme n'ebe nile. Anụ ahụ na-echekwa na-ama na-anakọta oké zuru ezu zuo data, ha na-emepe emepe akụrụngwa inyocha ahịa zụọ ahịa omume na mix experimentation n'ime eme azụmahịa omume. Yabụ, mgbe ị na-eche banyere digital afọ ị kwesịrị ọ bụghị nanị na-eche online, ị kwesịrị ị na-eche n'ebe nile. Digital afọ elekọta mmadụ nnyocha ahụ ga-agụnye ndị mmadụ inwe mmekọrịta na n'ụzọ zuru ezu dijitalụ oghere na ahụ ga-agụnye ndị mmadụ na-eji dijitalụ ngwaọrụ na ụwa nkịtị.
Na mgbakwunye na-enyere ndị na-amata ọtụtụ omume na randomization nke agwọ ọrịa, dijitalụ afọ nwekwara nyeere ọhụrụ ụzọ maka ndị mmadụ na-ekwurịta okwu. Ndị a ụdị ndị ọhụrụ nke nkwurịta okwu kwere ka na-eme nnyocha na-agba ọsọ otutu nnyocha ndị e mere na ike uka mmekota na ndị ọrụ ibe ha na izugbe ọha.
A obi abụọ nwere ike izo aka na ọ dịghị nke a ike bụ n'ezie ndị ọhụrụ. Ya bụ, n'oge gara aga, e nwere ndị ọzọ na isi ọganihu iche iche 'ikike na-ekwurịta okwu (eg, ndị Telegraph (Gleick 2011) ), na kọmputa na e na-ngwa ngwa na Olee ihe enyemaka otu ọnụego ebe ọ bụ na 1960 (Waldrop 2016) . Ma, ihe a skeptic na-efu bụ na MGBE ụfọdụ mgbe ihe nke otu na-aghọ ihe dị iche iche (Halevy, Norvig, and Pereira 2009) . A bụ otu ihe ntụnyere na-amasị m. Ọ bụrụ na ị nwere ike weghara ihe oyiyi nke a ịnyịnya, mgbe ahụ i nwere a foto. Na, ọ bụrụ na i nwere ike weghara 24 oyiyi nke a ịnyịnya kwa abụọ, mgbe ahụ, i nwere otu ihe nkiri. N'ezie, a nkiri bụ nnọọ a ụyọkọ photos, ma ọ bụ nanị a na-anwụ ike obi abụọ ga na-ekwu na foto na fim bụ otu.
Researchers na-na usoro nke ime ka a mgbanwe akin ka mgbanwe site foto na-eju. Mgbanwe a apụtaghị na ihe niile anyị mụtara n'oge gara aga kwesịrị ileghara anya. Dị nnọọ ka ụkpụrụ nke foto agwa ụkpụrụ nke eju, ụkpụrụ nke na-elekọta mmadụ nnyocha na n'oge gara aga ga-agwa ndị na-elekọta mmadụ nnyocha nke ga-eme n'ọdịnihu. Ma, ntughari pụtakwara na anyị ekwesịghị ịnọgide na-eme otu ihe. Kama nke ahụ, anyị ga-ikpokọta na-eru nso nke gara aga na ike nke ugbu a ma n'ọdịnihu. Dị ka ihe atụ, nnyocha nke Blumenstock na ndị ọrụ ibe bụ ngwakọta nke ọdịnala nnyocha e mere nnyocha na ihe ụfọdụ pụrụ ịkpọ data sayensị. Ma nke ndị Efrata dị mkpa: ma nnyocha e mere Ibọrọ ma ọ bụ ekwentị na ndekọ site onwe ha ahụ zuru. More n'ozuzu, M na-eche na aghọwanye-elekọta mmadụ na-eme nnyocha ga-mkpa ikpokọta-elekọta mmadụ na sayensị na data sayensị iji na-uru nke ohere nke dijitalụ afọ. Iji nọgide na naanị ewere foto mgbe anyị nwekwara ike a na-eme na fim ga-abụ ihie.